सरकारले चिन्न नसकेको बाजुराको बडिमालिका - Everest Dainik - News from Nepal
सरकारले चिन्न नसकेको बाजुराको बडिमालिका
बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा रहेको बडिमालिका सुदूपश्चिममा रहेको सुप्रसिद्ध धार्मिक धरोहर हो । यो ठाँउ आफैमा एउटा स्वर्गको टुक्रा हो । यो ठाउँमा रहेका मन लोभ्याउने दृश्यले सबै मानिसको साह्रै मन लोभ्याउँछ ।
लेखक विजयराज गिरी
समुन्द्री सतहबाट झन्डै ४ हजार दुई सय किलोमिटर उचाइमा बडिमालिका माता बिराजमान छिन् । प्रायः दर्शन गर्ने भक्तजनको मनोकांक्षा पूरा भएरै होला धेरै मानिस आफ्नो जीवनकालमा दुई पटक मालिका माता कहाँ पुगेर भेटी जढाउन आउने गर्छन् ।
बडिमालिकामा नेपालका विभिन्न जिल्लाका साथै भारतको केही ठाँउबाट भक्तजन आउने गर्दछन् । यो क्षेत्रमा प्रायः साउन–भाद्रमा कुम्भमेला लाग्ने गर्दछ । जति धेरै दुःख कष्टहरुको सामना गरेर गएपनि त्यो ठाँउमा पुगेपछि हरेक मानिसको मनको दुःख–कष्ट सबै बिर्साउने किसिमको वातावरण छ । शान्त, स्वच्छ हावा यो ठाउँको ठूलो विशेषता हो ।
नेपालका थुप्रै भिआइपी र भिभिआइपीले आफ्नो कार्यकालमा एकपटक बडिमालिकामा अवश्य दर्शन गर्ने गरेका छन् । तर, विडम्बना बडिमालिकाको विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको पर्यााप्त नजर पुग्न सकेको छैन । जसकारण यो पर्यटकीय क्षेत्र जति चर्चामा आउनुपर्ने हो त्यती आउन सकेको छैन ।
सरकारले भिजिट वर्ष २०२० को नारा त लगायो तर खैत पर्यटनमैत्री बनाएको? नेपालमा आएको पर्यटकको चाहना हुन्छ कि नेपालमा भएका थुपै मनमोहक दृश्य हेर्ने तर कसले बताइदिने काठमाडौंमा आएका पर्यटकलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका ती मनमोहक दृश्य हेर्ने माहोल?
संसारका हरेक विकसित देशले कीर्तिम पर्यटकिय स्थल बनाएर देशको आधा आर्थिक भार धानेको हुन्छ । तर हाम्रो ठाउँमा प्रकृतिले उपहार दिएका मनमोहक क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारको ध्यान छैन । जसकारण नेपालको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन हुनसकेको छैन ।
हाम्रोा देशमा अनेकौं प्राकृतिक साधन र स्रोत हुँदाहुँदै पनि सरकारले खासै ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारले भिजिट वर्ष २०२० को नारा त लगायो तर खैत पर्यटनमैत्री बनाएको? नेपालमा आएको पर्यटकको चाहना हुन्छ कि नेपालमा भएका थुपै मनमोहक दृश्य हेर्ने तर कसले बताइदिने काठमाडौंमा आएका पर्यटकलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका ती मनमोहक दृश्य हेर्ने माहोल? म भन्छु पर्यटन मन्त्रीलाई भन्छु तपाइले नै नेपाल भित्रमा हिराका टुक्रालाई चिन्न सक्नु भएको छैन ।
स्थानीय सरकारको पनि बाध्यता छ, थोरै लगानीमा यी सबै काम नहुने ठूलो लगानी केन्द्र सरकारले नदिने । अनि कसरी हुन्छ विकास? जनताहरु कर त सबै ठाँउको तिर्छन् तर विकास भने शहरमा मात्र भएको देखिन्छ । गाउँको अवस्थामा अझैं पनि सुधार हुनसकेको छैन ।
पहिला आफू राम्रोसँग घुम्नुहोस् मन्त्री ज्यू अनि धेरै कुरा गर्नुस्, कुरा मात्र होइन काम पनि गर्नुस् । देश संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि ओझेलमा परेका पर्यटकीय स्थानले प्रचार पाउलान् भन्ने ठूलो आशा थियो । तर, आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुन थालेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस बसभित्र प्रधानाध्यापक मृत भेटिए
हुनत स्थानीय सरकारको पनि बाध्यता छ, थोरै लगानीमा यी सबै काम नहुने ठूलो लगानी केन्द्र सरकारले नदिने । अनि कसरी हुन्छ विकास? जनताहरु कर त सबै ठाँउको तिर्छन् तर विकास भने शहरमा मात्र भएको देखिन्छ । गाउँको अवस्थामा अझैं पनि सुधार हुनसकेको छैन ।
यदि हामीले बढीमालिकाको स्तोरउन्नतिको लागि कैलाशमाण्डौं डाँडाँबाट बडिमालिकासम्म केबुलकारको लागि प्रक्रिया अगाडि बढायौं भने पक्कै पनि पर्यटक, भक्तजनलाई पनि सजिलो हुने थियो । र, नगरपालिका पनि समृद्ध हुने थियो ।
अब केन्द्र सरकारको आश नगरी स्थानीय सरकारले नै बडिमालिकाको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्न जरुरी छ । विशेष गरी त्रिवेणी नगरपालिकाले बढीमालिकाको दर्शन गर्न भक्तजनलाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यो बारेमा सोच्न जरुरी छ । यदि हामीले बढीमालिकाको स्तोरउन्नतिको लागि कैलाशमाण्डौं डाँडाँबाट बडिमालिकासम्म केबुलकारको लागि प्रक्रिया अगाडि बढायौं भने पक्कै पनि पर्यटक, भक्तजनलाई पनि सजिलो हुने थियो । र, नगरपालिका पनि समृद्ध हुने थियो । यदि यसो भयो भने किम्नी छडो झरनादेखि लिएर बिनिपातन, खेतिबेती, नातेस्वरी मन्दिर र मौरे क्षेत्रको पनि अझै राम्रो पहिचान र सम्वद्धन हुने थियो ।
आशा छ आगामी केही महिनामा नगरपालिकाको यसतर्फ ध्यान जानेछ । यदि यसो भएछ भने मोतिपानी क्षेत्रमा व्यावसायिक तरिकाले स्याउ, आलु, च्याउ खेतीले राम्रो व्यापारिक क्षेत्र ओगट्ने छ । त्यसपछि प्रादेशिक राजधानी अत्तरिया कैलालीदेखि केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंसम्म बाजुरामा उत्पादन भएका आलु, स्याउ, च्याउ, यार्सागुम्बा, चिराइतो, पाँचऔंलेदेखि लिएर अन्य थुप्रै किसिमका जडिबुटी र अर्गानिक फलफूल, तरकारीले बजार लिनेछ । यति गर्न सकेमा भारतबाट आयात हुने रासायनिक फलफूल र तरकारीहरु केही मात्रामा बन्द हुनेछ । यसतर्फ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्षन जान आवश्य छ । लेखक गिरी हाल रोजगारीको शिलशिलामा यूएई (दुबई) मा छन् ।
ट्याग्स: बडिमालिका, बाजुरा, बिजयराज गिरि